News & Promotions | Yangon Aerodrome
News & Promotions	Yangon Aerodrome	2018-08-15T14:42:41+00:00
YIA’s security personnel detected smuggled narcotics bound for Malaysia
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများသည် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာမည့် ခရီးသည်တစ်ဦး၏ ခရီးဆောင်အိတ်ထဲမှ စိတ်ကြွဆေးပြားများ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြပါသည်။ လေဆိပ်၏ လုံခြုံရေးစစ်ဆေးသည့် X-ray စက်တွင် စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေစဉ် ခရီးသည်၏ ခရီးဆောင်အိတ်ထဲမှ သံသယရှိဖွယ်ပစ္စည်းများကို ထောက်လှမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီး လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်းများမှ အဆိုပါ ခရီးဆောင်အိတ်အား ဆက်လက်ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်မပြုတော့ပဲ လေဆိပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များထံ အပ်နှံသတင်းပို့ခဲ့ကြပါသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ တရားဝင် Facebook Page တွင် အောက်ပါ link https://www.facebook.com/yangonpolice/posts/1619729598156301 အတိုင်း သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Our security team detected smuggled narcotics in the luggage ofapassenger bound for Kuala Lumpur, Malaysia at Terminal 1. The airport’s in-line X-ray baggage system detected the suspicious items in the luggage of that passenger and our security team rejected the baggage immediately and reported the incident to the Airport Police.
For more details, please refer to Yangon Police Official Facebook page: https://www.facebook.com/yangonpolice/posts/1619729598156301
By Yangon Aerodrome| 2018-08-17T12:24:09+00:00	August 17th, 2018|Categories: Blog|0 Comments
Promotions at YIA: August 2018
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အတွင်းရှိ အရောင်းဆိုင်များတွင် သြဂုတ်လ၏ အထူးလျှော့ဈေးအနေဖြင့် အောက်ပါအစီအစဉ်များကို ရယူခံစားနိုင်ပါပြီ။
– Coach ၌ Chelsea၊ Turnlock tote နှင့် Clarkson အမျိုးအစားများမှ အိတ်ဝယ်ယူ၍ Wristlet တစ်ခု ၊
– Desigual ၌ $ 99 နှင့်အထက် ၀ယ်ယူ၍ Jewelry Case ၊
– Furla ၌ $ 300 နှင့်အထက် ၀ယ်ယူ၍ Card Case ၊
– Kipling ၌ $ 200 နှင့်အထက် ၀ယ်ယူ၍ Kipling Travel Adaptor ၊
စသဖြင့် စိတ်ဝင်စားစရာ လက်ဆောင်များကိုရယူနိူင်ပါပြီ။
Enjoy our exclusive promotions at YIA retail stores for the month of August!
-PurchaseaTurnlock Tote, Chelsea or Clarkson bag and receiveafree wristlet at Coach while stocks last.
-Getafree jewelry case for purchases exceeding $99 at Desigual until stocks last.
-Receiveafree card case asaspecial gift with purchases of $300 and more at Furla withinalimited time.
-Getafree Kipling Travel Adapter with minimum spend of $200 while stocks last.
By Yangon Aerodrome| 2018-08-15T10:12:13+00:00	August 15th, 2018|Categories: Blog|0 Comments
Yangon International Airport implements additional measures at T1
ယမန်နေ့ နံနက်က ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ခရီးသည်အများအပြားထူထပ်မှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးနောက် လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖြည့်တင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ ပါသည်။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အနေဖြင့် ခရီးသွားပြည်သူများ၊ လေဆိပ်ရှိ ဝန်ထမ်းများ နှင့် လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းများ အဆင် ပြေချောမွေ့စွာ ၀င်ထွက်သွားလာနိုင်ရန်အတွက် Terminal 1 ရှိ သက်ဆိုင်ရာဝင်ပေါက်များတွင် လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုစက်ပစ္စည်းများ၊ ၀န်ထမ်းအင်အားများ ဖြည့်တင်းထားရှိပေးခြင်း အစရှိသည့် လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖြည့်တင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး လုံခြုံရေး စစ်ဆေးမှုဖြတ်သန်းရာတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေခဲ့ပြီး တန်းစီစောင့်ဆိုင်းမှု ကြာချိန်များကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။
Following unprecedented high passenger traffic volume during the morning peak hour at YIA, we providedaseries of additional measures to improve overall passenger flow at the entry ways of T1.
We opened new entry channels, added security scanning equipment and increased manpower for passengers, visitors, airport staff and crew members at selected entrances of T1 allowing smooth security screening and minimal waiting times.
By Yangon Aerodrome| 2018-07-28T23:27:08+00:00	July 28th, 2018|Categories: Blog|0 Comments
YIA witnessed overwhelming passenger traffic today as 11 airlines move to Terminal 1 coupled with travellers for Full Moon Day of Waso
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် Terminal1 – ၂၇ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၈ မှစ၍ လေကြောင်းလိုင်း စုစုပေါင်း ၂၇ လိုင်းကိုဝန်ဆောင်မှူပေး
• လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု ( Screening ) လမ်းကြောင်း များတိုးချဲ့မှု။
• ဆိုက်ရောက်ခရီးသည်များအတွက် Gate အသစ်များဖွင့်လှစ်ထားရှိမှု။
• လေကြောင်းလိုင်းနှင့်လေဆိပ်ဝန်ထမ်းများအတွက် သီးသန့် ဝင်ပေါက်များထားပေးမှု။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သည် ၄င်း၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် Terminal 1 တွင် ခရီးသည်အများအပြားထူထပ်မှုကို ယနေ့ နံနက်တွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ယခင် Terminal2မှ လေကြောင်းလိုင်း ၁၁ လိုင်း Terminal 1 သို့ ယနေ့စတင်ပြောင်းရွှေ့ပြေး ဆွဲပျံသန်းခြင်းနှင့်အတူ နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်သော ၀ါဆိုလပြည့်နေ့အားလပ်ရက်တွင် ခရီးသွားလာသူများ နှင့် ၄င်းတို့အား လိုက်ပါပို့ဆောင် နှုတ်ဆက်သူများ များပြားလာမှုတို့ကြောင့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ ခရီးသည်ထူထပ်မှုစံချိန်တင်တိုးတက် များပြားခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေကြောင့် ယနေ့ နံနက်အစောပိုင်း လေယာဉ်အတက်အဆင်း များပြားချိန်၌ ခရီးသည်များသည် Terminal 1 ရှိ ၀င်ပေါက်များတွင် ကြန့်ကြာမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အနေဖြင့် ခရီးသည်များ ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ၀င်ထွက်သွားလာနိုင်ရန် လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှု (Screening) ဖြတ်သန်းရန် ၀င်ပေါက်လမ်းကြောင်း စုစုပေါင်း လေးကြောင်း နှင့် ၀န်ထမ်းအင်အားများ ထပ်မံဖြည့်တင်းပေးထားပါသည်။
လတ်တလောကာလတွင် ခရီးသည်များ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အဆင်မပြေမှုများအတွက် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ခရီးသည်များအား Terminal 1 တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ပေး အပ်သွားနိုင်ရန် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
YIA witnessed an overwhelming jump in passenger traffic this morning at its international terminal. As 11 airlines from Terminal2commenced operations at Terminal 1 today coupled with an unprecedented number of travellers, meeters and greeters during the long weekend for the Full Moon Day of Waso, traffic at the airport surged to record levels and that situation led to passenger delays at the entry ways of T1 during the early peak hour.
We have establishedatotal of four additional screening lanes and increased manpower to ensure smoother passenger flows.
We apologise for any inconvenience caused this morning and look forward to provide better passenger experiences to all our passengers moving forward.
By Yangon Aerodrome| 2018-07-27T18:26:50+00:00	July 27th, 2018|Categories: Blog|0 Comments
YIA handled inflight medical emergency
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံးနှင့် အစည်ကားဆုံးလေဆိပ် ဖြစ်သည့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည် ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု လိုအပ်ချက်ကြောင့် ဆင်းသက်လာသော ဆော်ဒီလေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ် ခရီးစဉ်အမှတ် SV871 အား အောင်မြင်စွာ လက်ခံဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပါသည်။
ခရီးသည်နှင့် လေယာဉ်ဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း ၃၉၀ ဦး တင်ဆောင်လာသော လေယာဉ်သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့ Ninoy Aquino အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ဒေသစံတော်ချိန် ၁၇း၀၅ နာရီ (GMT +8:00) တွင် Medina လေဆိပ်သို့ ဦးတည်ထွက်ခွာခဲ့ရာ မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၉း၅၆ မိနစ် (UTC +6:30) တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ အရေး ပေါ်ဆင်းသက်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး အောင်မြင်စွာ ဆင်းသက်လာခဲ့သည်။
Yangon International Airport (YIA), the largest and busiest airport in Myanmar, handled an inflight medical emergency onboard Saudia Flight SV871 (B-777-3FG (ER)) on 22 July 2018.
Carrying 390 passengers and crew, the flight departed from Manila Ninoy Aquino International Airport at 1704 hrs (GMT +8:00) and was bound for Medina Airport. Flight SV871 requested permission to divert to RGN and landed safely at Yangon International Airport at 1956 hrs (UTC +6:30).
By Yangon Aerodrome| 2018-07-23T21:38:57+00:00	July 23rd, 2018|Categories: Blog|0 Comments
Eleven airlines will start operating at Terminal 1 from 27 July onwards
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ Terminal နှစ်ခု ချိတ်ဆက်အသုံး ပြုခြင်းကို ဇူလိုင်လ ပထမပတ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး လေကြောင်းလိုင်း ၁၁ လိုင်းသည် ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်မှစတင်၍ Terminal 1 သို့ ပြောင်းရွှေ့အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ပြောင်းရွှေ့မှုတွင် Nok Air လေကြောင်းလိုင်းသည် ယနေ့မှစတင်၍ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် Terminal 1 တွင် ပြောင်းရွှေ့အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပြီး ၄င်းသည် ဇူလိုင်လအတွင်း တတိယမြောက်ပြောင်းရွှေ့သည့် လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်တွင် Biman Bangladesh Airways နှင့် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်တွင် VietJet Air တို့ အသီးသီးပြောင်းရွှေ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Nok Air ၏ DD-4230/31 နှင့် DD-4238/39 ခရီးစဉ်များကို Check-in area ရှိ Row D ၊ Counter အမှတ် ၁၁ ၊ ၁၂ နှင့် ၁၃ တို့တွင် ပြောင်းရွှေ့ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
With the opening of Yangon International Airport’s inter-terminal connection during the first week of July, all eleven airlines will start operating at Terminal 1 from 27 July onwards.
Starting its operations at T1, YIA from today, Nok Air will be the third airline to move this month following Biman Bangladesh Airways on7July and VietJet Air on 12 July. The new check-in area for the DD-4230/31 and DD-4238/39 flights are located at Row D, Counters 11, 12 and 13.
By Yangon Aerodrome| 2018-07-23T21:30:47+00:00	July 23rd, 2018|Categories: Blog|0 Comments